Fiidiyow-Cashar: Sida loo sameeyo boodh dhaqdhaqaaq leh oo Photoshop ah si fudud | Abuurista khadka tooska ah
Video-Tutorial: Sida loo sameeyo boodh dhaqaaqaya Photoshop si fudud
Antonio L. Carter | | Qalabka Naqshadeynta, Photoshop, Tababarada, dhowr
Maanta casharradan fiidiyowga ah, waxaan ku bari doonaa sida loo sameeyo loona diyaariyo mashruuc in la sameeyo calan leh barnaamijka Adobe Photoshop, ee fiidiyowga-casharka xiga ah si uu kuu baro sida wax yar loo bixiyo animation, iyo sidoo kale inay u dhoofiso diyaar ahaan
Waxaan ku bilaabayaa adiga oo kuu sheegaya ninka sawirku ka muuqdo, in aanu ahayn nin aan la aqoon oo laga soo xushay baanka sawir kasta, maya mudane, kani waa Weyn Milton Glaser, abuuraha astaanta Waan jeclahay New York intee in leeg ayaa saameyn ku yeelatay bulshadeena qarnigii la soo dhaafay ama daboolka Bob Dylan.
Hagaag, ka tagida qoraalka taariikheed, aan bilowno fiidiyowgaan-barashada ah: Sida loo sameeyo calammo dhaqaaqa Photoshop si fudud, Video-Tutorial-kii iigu horreeyay ee aan rajeynayo inaad jeceshahay oo aad ka heli doontid waxtar badan. Aynu bilowno.
I) Waxaan sameynaa sawir leh halabuurkeenna oo waxaan bilownay abuurista iyo baaritaanka qaybaha kala duwan ee calanka.
II) Waxaan raadineynaa oo soo dejineynaa sawirkii Milton Glaser-kii wanaagsanaa, oo ah dabeecad aan u doortay inaan ku qaato astaanteena.
III) Waxaan fureynaa Adobe Photoshop oo waxaan sameyneynaa dukumiinti cusub. Waxaan kala dooraneynaa kala horeynta kala duwan in Photoshop uu ina siinayo inaan u isticmaalno qaab web. Dhamaantood, waxaan dooranay 800 × 600 shiraac, taas oo cabir fiican u ah banner.
IV) Waxaan fureynaa feylka JPG oo ay kujiraan sawirka Milton Glaser wanaagsan waxaana udiyaarineynaa inaan dib udhigno sawirka.
V) Waxaan ka dooranay kooxda qalabka xulashada, mid ka mid ah Loops, the Loop Magnetic kiiskan. Waxaan dulmarnaa Milton wanaagsan.
VI) Marka la tilmaamo, waxaan tagnaa wadada Xullada-Sifee Edges. Waxaan u adeegsaneynaa qalabkaas si aan u sameyno geesaha sawirka si wanaagsan loo qeexay.
VII) Markaan uga tagno geesta Milton gebi ahaanba sida aan u jecelahay isticmaalka qalabka Sifee Edge, waan cadaadinaa CNTRL + J iyo lakab cusub ayaa lagu soo saari doonaa xulashada.
VIII) Waxaan baabi'ineynaa lakabka asalka sidaasna waxaan kuheleynaa Milton a asalka hufan in aan u isticmaali karno calamadeena.
IX) Si aan u kaydinno waxaan u isticmaali doonnaa aaladda loo yaqaan 'Save for web tool'. Gudaha sanduuqa wada hadalka ee qalabkan, waxaan kaheleynaa suurtagalnimada dhoofinta feylka noocyo faylal ah oo kaladuwan sida GIF, JPG ama PNG. Hagaag, faylkan waxaan u dhoofineynaa, si aan ugu hayno asal hufan. Waan keydinaa oo magacawnnaa. Waxaan uxirnaa oo keydineynaa PSD wixii dhici kara.
X) Waxaan ku laabaneynaa mashruuceena webka, oo ah calanka. Waxaan u beddeleynaa midabka lakabka asalka illaa madow. Si tan loo sameeyo waxaan u adeegsanaa aaladda Rinjiga baaldiga, innaga oo midabka hore u beddelayna madow oo si toos ah u riixna lakabka asalka.
XI) Waxaan ku bilaabaynaa soo dejinta sawirka Milton Glaser goobteena shaqada ama shiraac. Tan waxaan u isticmaalnaa Qalabka meesha, laga helay xulashada feylka.
XII) Glaser wanaagsan oo wanaagsan ayaannu geeska hoose dhignay midigta shaashadda.
XIII) Waxaan ka abuureynaa xumbo hadal majaajiliistaha. Waan dhigeynaa sidaa darteed waxay umuuqataa Glaser inuu hadlayo.
XIV) Waxaan ku abuureynaa 3 weedho leh Qalabka qoraalka, kuwaas oo ah kuwa ku siin doona macluumaadka banner. Midkood ayaa aadaya gudaha sandwich-ka.
XV) Weedho kastaa waa inay ku socdaan lakab qoraal oo kale.
XVI) Oo markaa waxaan haysannaa wax walba oo diyaar u ah inaan bilowno sii animation calamadeena.
Casharka fiidiyowga ee soo socda ayaan ku bari doonaa sida loo siiyo animation-ka bannerkeena. Ha moogaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Video-Tutorial: Sida loo sameeyo boodh dhaqaaqaya Photoshop si fudud